Dhanieri 6 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Vakuru vakuru vePezhiya vanorukira Dhanieri zano (1-9)
Dhanieri anoramba achinyengetera (10-15)
Dhanieri anokandwa mugomba reshumba (16-24)
Mambo Dhariyasi anokudza Mwari waDhanieri (25-28)
6 Dhariyasi akaona kuti zvakanga zvakanaka kuti agadze machinda 120 kuti atungamirire muumambo hwacho hwese.+ 2 Machinda acho aitungamirirwa nemakurukota matatu, uye Dhanieri+ aiva mumwe wamakurukota acho; machinda+ acho aivapa mashoko kuti pasava neanokanganisa zvido zvamambo. 3 Zvino Dhanieri airatidza kuti akasiyana nemamwe makurukota nemachinda nekuti aiva nepfungwa dzakapinza+ zvekuti mambo aida kumupa chinzvimbo chepamusoro muumambo hwacho hwese. 4 Panguva iyoyo makurukota acho nemachinda acho vaigara vachitsvaga pekubatira Dhanieri panyaya dzine chekuita neumambo hwacho, asi vaishaya chekumupomera kana chimwe chinhu chakaipa chaaiita, nekuti akanga akavimbika uye aiita basa rake nemazvo, asingaiti zveuori. 5 Varume vacho vakabva vati: “Hatisi kuzombowana chatingapomera Dhanieri, kunze kwekunge tatomutsvagira mhosva tichishandisa mutemo waMwari wake.”+ 6 Saka makurukota acho nemachinda vakapinda maiva namambo vari boka, vakati kwaari: “Imi Mambo Dhariyasi, raramai nekusingaperi. 7 Vakuru vese vemuumambo, nemakurukota, nemachinda, navanachipangamazano, nemagavhuna, vese zvavo, varangana kuti padzikwe murau wamambo wekuti, kwemazuva 30, munhu wese anoteterera kune mumwe mwari kana mumwe munhu kunze kwenyu, imi mambo, anofanira kukandwa mugomba reshumba,+ uye vachaona kuti murau wacho watevedzerwa. 8 Zvino imi mambo, dzikai murau wacho muusaine,+ kuti urege kuchinjwa, maererano nemutemo wevaMedhiya nevaPezhiya usingagoni kuchinjwa.”+ 9 Saka Mambo Dhariyasi akasaina murau wezvairambidzwa zvacho. 10 Asi Dhanieri paakangoziva kuti murau wacho wakanga wasainwa, akaenda kuimba yake, iyo yaiva neimba yepadenga yaiva nemahwindo akavhurika akatarisa kuJerusarema.+ Katatu pazuva, aipfugama achinyengetera, achirumbidza Mwari wake, sezvaakanga agara achiita izvi zvisati zvaitika. 11 Panguva iyoyo varume vacho vakangoerekana vapinda, vakawana Dhanieri achiteterera nekukumbira kunzwirwa nyasha pamberi paMwari wake. 12 Saka vakaenda kuna mambo vakamuyeuchidza nezvemurau waakanga adzika vachiti: “Hamuna here kusaina murau wekuti kwemazuva 30, munhu wese anoteterera kune mumwe mwari kana mumwe munhu kunze kwenyu imi mambo, anofanira kukandwa mugomba reshumba?” Mambo akapindura kuti: “Nyaya yacho yakanyatsosimbiswa maererano nemutemo wevaMedhiya nevaPezhiya usingagoni kuchinjwa.”+ 13 Vakabva vati kuna mambo: “Dhanieri, mumwe wenhapwa dzakabva kuJudha,+ haasi kukuremekedzai imi mambo, uyewo haasi kuteerera murau wamakasaina, asi ari kunyengetera katatu pazuva.”+ 14 Mambo paakangonzwa mashoko aya, akanetseka chaizvo uye akafunga kuti onunura sei Dhanieri; uye zuva rakatosvika pakunyura achiedza zvese zvaaigona kuti amununure. 15 Varume vacho vakazopinda maiva namambo vari boka, vakati kwaari: “Mambo, yeukai kuti mutemo wevaMedhiya nevaPezhiya ndewekuti kana mambo akarambidza chimwe chinhu kana kuti akadzika murau, hapana chinofanira kuchinjwa.”+ 16 Saka mambo akapa murayiro, vachibva vauya naDhanieri vakamukanda mugomba reshumba.+ Mambo akati kuna Dhanieri: “Mwari wako wauri kushumira nguva dzese, achakununura.” 17 Pakabva patorwa dombo rikaiswa pamuromo wegomba racho, mambo achibva aridhinda nerin’i yake ine chidhindo* uye nerin’i ine chidhindo yemakurukota ake, kuti parege kuva nechinochinjwa pamusoro paDhanieri. 18 Mambo akabva aenda kumuzinda wake. Akatsanya usiku hwese uye akaramba kuva nezvinomuvaraidza.* Hope dzake dzakaramba kuuya. 19 Ava mambakwedza, mambo akasimuka achibva angoenda kugomba reshumba. 20 Ava kusvika pagomba racho, akashevedzera kuna Dhanieri akasuruvara. Mambo akati kwaari: “Dhanieri, mushumiri waMwari mupenyu, Mwari wako waunoshumira nguva dzese akwanisa kukununura pashumba here?” 21 Dhanieri akabva ati kuna mambo: “Raramai nekusingaperi mambo. 22 Mwari wangu atuma ngirozi yake ikavhara miromo yeshumba,+ uye hadzina zvadzandiita,+ nekuti ndawanikwa ndisina mhosva pamberi pake; uyewo hapana chandakakutadzirai imi mambo.” 23 Mambo akafara kwazvo, uye akarayira kuti Dhanieri abudiswe mugomba racho. Dhanieri akabudiswa mugomba racho asina kana kumbokuvara, nekuti akanga avimba naMwari wake.+ 24 Mambo akabva apa murayiro, uye varume vaya vakanga vapomera Dhanieri vakaunzwa vachibva vakandwa mugomba reshumba ivo nevanakomana vavo nemadzimai avo. Shumba dzacho dzakavagamha vasati vasvika pasi, dzikapwanya-pwanya mapfupa avo ese.+ 25 Mambo Dhariyasi akabva anyorera marudzi ese, nenyika nevanhu vemitauro yakasiyana-siyana pasi rese+ achiti: “Rugare rwenyu ngaruwande! 26 Ndadzika murayiro wekuti, muumambo hwangu hwese, vanhu vanofanira kudedera nekutya pamberi paMwari waDhanieri.+ Nekuti ndiye Mwari mupenyu, uye haana magumo. Umambo hwake hahuzomboparadzwi, uye utongi hwake hahugumi.+ 27 Anonunura+ nekuponesa uye anoita zviratidzo nezvishamiso kudenga nepanyika,+ nekuti akanunura Dhanieri pamiromo yeshumba.” 28 Saka Dhanieri akabudirira muumambo hwaDhariyasi+ nemuumambo hwaKoreshi muPezhiya.+
^ Kana kuti “chisimbiso.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “haana kuunzirwa vanoridza mimhanzi.”